Madaxweyne Sheekh Shariif Oo Shacabka Ugu Hambalyeeyay Doorashada Ka Dhacday Dalka
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo mudaneyaasha baarlamanka ugu hambalyeyay doorashada gudoonka Baarlamanka iyo ku xigeenadiisa.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo caawa shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyada Qaranka ayaa shacbiga Soomaaliyed iyo mudanayaasha baarlamaanka ugu hambalyeeyey doorashada gudoonka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa oo maanta ka dhacday xarunta akadeemiyada General Kaahiye ee magaalada Muqdisho.
Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in muddo 42 sanno ah kaddib magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada madaxda Qaranka ay tahay dhacdo muhiim ah, waxa uuna Alle uga beryey shacabka Soomaaliyeed in ay hantaan Qarankoodii, maadaama hadda la guda galay dhismihii hay’addaha sharci dajinta ee dowladda.
Dhinaca kale Shariif Sheekh Axmed ayaa u mahad celiyay dhamaan dadkii ka shaqeeyay hormarka dalka iyo qabsoomida doorashooyinka madaxda dalka ugu sareysa oo qaarkood haatan lagu guuleysatay in si nabad galyo ah ay u dhacdo.
Ugu dambeyntii ayuu Madaxweynuhu shacbiga nabada jecel ka codsaday in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo hormarka iskana iloowaan dhaawacyadii ka soo gaaray mudadii uu burburka jiray lana wajaho dib u dhis dalka iyo kala dambeynta.
Hadalka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xili caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho lagu doortay Guddoonka Barlamaanka iyo ku xigeennadiisa, taasi oo aan muddo dheer ka dhacin guddaha dalka, waxaa maalmaha soo socda lagu wadaa in isla caasimadda lagu qabto doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, si loo soo dhammeystiro dhismaha hay’addaha Qaranka Soomaaliyeed.